Nagu saabsan - Hebei Joyroll Conveyor Makiinado Co., Ltd.
Hebei Joyroll Conveyor Makiinado Co., Ltd.
Waxaan ku adkeysaneynaa siyaasada tayada leh "Tayada waa nolosheena, Sumcaduna waa mustaqbalkeena, Qanacsanaanta waa baacsigeena, Hormarintuna waa hadafkeena", iyo dammaanad in aan siino alaabada ugu fiican macaamiisheena
Hebei Joyroll Conveyor Makiinado Co., Ltd.oo la aasaasay 2008, waa soo saare xirfadle ah oo xambaarsan suunka gudbiya iyo qaybo. Warshaddeenu waxay ku taalaa feixiang park park, handan city, hebei region, China, oo daboolaysa 33000 mitir murabac ah. Warshaddeenu waxay leedahay khadka wax soo saarka gawaarida gawaarida tooska ah ee casriga ah ee casriga ah, waxay leedahay khadka wax soo saarka ee korantada korantada leh, iyo qalab tijaabo ah oo tijaabo ah, qalab wax soo saar sanadle ah 600,000 kumbiyuutarro xayeysiis ah. Waxaan soo saari karnaa nooca TD75 ee Shiinaha iyo nooca DT II ee rullaluistemadka, sidoo kale waxay soo saari kartaa rullaluistemadka bilaa istaagga ah iyadoo loo eegayo heerka caalamiga ah, sida DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR iwm. iska caabbinta iska caabinta, cadeynta siigada, cadeynta biyaha, buuqa yar, si wanaagsan u wareegaya, keydinta tamarta, adeega dheer ee 50,000 saacadood ah.
Heerka tiknoolajiyada wax soo saarka Joyroll iyo tayada wax soo saarku waxay kasbadeen macaamiisha dal iyo dibadba, waxsoosaarka ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa dhuxusha, macdanta, dekedaha, dhismaha, mashiinnada birta, warshad koronto iyo beero kale, waxaana loo dhoofiyaa Jarmalka, Australia, Russia , Koonfur Afrika, Brazil, Indonesia iyo wixii la mid ah, in ka badan 50 waddan iyo gobollo.